Universal ဒီဇိုင်း - Accessibility များအတွက် Build လုပ်နည်း
Universal ဒီဇိုင်း - အားလုံးအတှကျဗိသုကာပညာ
ဗိသုကာမှာတော့တစ်လောကလုံးဒီဇိုင်းကိုငယ်ရွယ်ပြီးအသက်နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်မသန်စွမ်းလူအားလုံး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, ကိုက်ညီသောနေရာများကိုဆိုလိုသည်။ အခန်း၏အစီအစဉ်ကနေအရောင်ရွေးချယ်မှုမှများစွာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလက်လှမ်းနေရာများ၏ဖန်တီးမှုသို့သွားပါ။ ဗိသုကာမသန်စွမ်းလူများအတွက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့, ဒါပေမယ့် Universal ဒီဇိုင်းအသုံးပြုနိုင်စွမ်းနောက်ကွယ်ကအတွေးအခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုမှာလူတိုင်းတတ်နိုင်-body ဖြစ်ပြီးရင်တောင် mobility ပြဿနာများ, အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံချို့ယွင်း, ဒါမှမဟုတ်သိမြင်မှုကျဆင်းဖန်တီးနိုင်, ရုတ်တရက်မတော်တဆထိခိုက်မှုဒါမှမဟုတ်ရေရှည်နာမကျန်း၏သက်ရောက်သည်။
Universal ဒီဇိုင်းအတွက် "လိုက်လျောညီထွေသို့မဟုတ်အထူးပြုဒီဇိုင်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲဖြစ်နိုင်သမျှအကြီးမြတ်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိလူအားလုံးအားဖြင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ဒီဇိုင်း, ။ " -Center
အဆိုပါဒီဇိုင်း၏ကောလိပ်မှာက Universal ဒီဇိုင်းစင်တာ, မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, ရှိသမျှတစ်လောကလုံးဒီဇိုင်းအဘို့အရာခုနစ်ပါးကျယ်ပြအခြေခံမူထူထောင်ထားပါတယ်:
အမြင်သတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ, အရောင်ဆနျ့ကငျြဘ)
"ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများမသန်စွမ်းလူများအတွက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်အတူတစ်လောကလုံးဒီဇိုင်းကိုစာမူနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်ကျွမ်းကျင်သူများကပုံမှန်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်စမ်းသပ်မှုများတွင်မသန်စွမ်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလူတို့ပါဝင်သည်လျှင် ပို. ထုတ်ကုန်လက်လှမ်းလူတိုင်းအားဖြင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါက။ " - မသန်မစွမ်း , အခွင့်အလမ်းများ, internetwork, နှင့်နည်းပညာ (လုပျဆောငျ-အိုင်တီ), ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်
သုံးခွင့် Spaces ဒီဇိုင်း
သမ္မတဂျော့ HW ဘုရ်ှကဇူလိုင်လ 26, 1990 ရက်တွင်ဥပဒေအဖြစ်မသန်မစွမ်းအက်ဥပဒေ (ADA) နဲ့အမေရိကန်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမယ့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်တစ်လောကလုံးဒီဇိုင်း၏စိတ်ကူးများကိုစတင်ရန်ခဲ့တာလဲ အဆိုပါ မသန်စွမ်းအက်ဥပဒေ (ADA) နဲ့အမေရိကန်တွေ က Universal ဒီဇိုင်းကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Universal ဒီဇိုင်းကျင့်သူမည်သူမဆိုဖွယ်ရှိ ADA ၏နိမ့်ဆုံးစည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
1525 မီလီမီတာ (60 လက်မ) ကအနည်းဆုံး 1965 မီလီမီတာ (78 လက်မ): တစ်စာရေးကိရိယာဘီးတပ်ကုလားထိုင်နှင့်ချောမွေ့ဦး-အလှည့်အဘို့လည်းအလုံအလောက်အခန်းထဲမှာလိုက်လျောညီထွေဖို့လုံလောက်တဲ့ကြမ်းပြင်အာကာသ Allow ။
အခန်းပေါင်းဖို့သေချာပါ entry ကိုတံခါးများ Make ကျယ်ပြန့်အနည်းဆုံး 815 မီလီမီတာ (32 လက်မ) ဖြစ်ကြသည်။
တောင်ပေါ်ကရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ကနေ 865 မီလီမီတာ (34 လက်မ) ထက်မပိုမြင့်နစ်မြုပ်။
ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာဘေးတွင်ဆုပ်ကိုင်အရက်ဆိုင် Install လုပ်ပါ။
အန္တရာယ်ချော်နှင့် tripping ရှိုးနိုင်ကြောင်း shag ကော်ဇော, မညီမညာဖြစ်နေသောအုတ်ကြမ်းပြင်များနှင့်အခြားကြမ်းပြင်မျက်နှာပြင်များရှောင်ကြဉ်ပါ။
အခန်းရဲ့အလယ်ဗဟိုရင်ဆိုင်နေရစဉ်ဒီတော့နားမကြားသောလူတာဝန်များကိုပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်အခန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ Mirrors ကတော့တစ်လောကလုံးဒီဇိုင်းကိုမှဆင်းရဲသားဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Universal ဒီဇိုင်းနေထိုင်မှုဓာတ်ခွဲခန်း (UDLL), နိုဝင်ဘာလ 2012 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်ခေတ်မီ Prairie စတိုင်အိမ်, ကိုလံဘတ်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဆန္ဒပြမူလစာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပျဆောငျ-အိုင်တီစင်တာ (မသန်မစွမ်း, အခွင့်အလမ်းများ, internetwork, နှင့်နည်းပညာ) ဆီယက်တဲလ်အတွက်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုပညာရေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာများနှင့်နည်းပညာများကိုအတွက်တစ်လောကလုံးဒီဇိုင်းကိုမြှင့်တင်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံတကာအစပျိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်း၏မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်မှာက Universal ဒီဇိုင်းများအတွက်စင်တာ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ရှေ့တန်းမှမှာမြှင့်တင်ရေးခဲ့, နှင့်ရန်ပုံငွေများအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့သည်။
> ဤဆောင်းပါး၏အဘို့ကို "ဒီစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့မူလစာမျက်နှာ" ဂျက်ကီ Craven ကနေအိမ်ဒီဇိုင်းစာအုပ်, Rockport ထုတ်ဝေသူများအနေဖြင့်အဆင်ပြေအောင်နေကြ
> Universal ဒီဇိုင်း, ဗားရှင်း 2.0, ဒီဇိုင်းကောလိပ်, မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, ဧပြီ 1, 1997 များ၏အခြေခံမူ
> လက်လှမ်းအသုံးဝင်သောနှင့်တစ်လောကလုံးဒီဇိုင်း, လုပျဆောငျ-အိုင်တီဝါရှင်တန်, ဇန်နဝါရီလ 24, 2013 ခုနှစ်တက္ကသိုလ်အကြားခြားနားချက် [မေလ 10, 2014 ဝင်ရောက်] သည်အဘယ်သို့
ဗိသုကာပညာရှင်များသင်္ချာပညာရှင် Be မှဖူးသလား?
Situ နှင့် Stick-Built နေအိမ်အတွက်
Anime 102: ရောကျလာသည် anime ၏သင်တန်းအမှတ်စဥ်
အဆိုပါ '' Cour '' ၏ Origins နဲ့ဘယျလိုကအန်နီမေးရှင်းအဘို့အဓိပ်ပာ
အိမ်စီမံကိန်းများကို Read လုပ်နည်း
10 Hilary ထူးထူးဆန်းဆန်း Rap ဂီတ Lyrics
Medical School ကျောင်းတွင်မအဘို့ကိုသင်ပြင်ဆင်ပါကြောင်းဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ
Dom Pedro ငါဘရာဇီး၏ပထမဦးဆုံးဧကရာဇ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုတော် Adele ရဲ့ "ဟဲလို" Love ရန် 10 အကြောင်းရင်းများ
ယောဟနျသ Riley ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
စာသင်ခန်း, အစည်းအဝေးများနှင့် Conferences ကဘို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူရေခဲပြင်တနေ့အားကစားပြိုင်ပွဲ
Kick သင်ခန်းစာသို့ပြန်သွားရန် Spinning - ခြောက်ခြေလှမ်းများခုနှစ်တွင် Kick အဆိုပါဗိုင်းငင် Back ကိုလေ့လာပါ
အဆိုပါ Tangut ဘယ်သူကသလော
အလှမယ် Sprint ဖလားဘယ်သူလဲခဲ့သလား
အဆိုပါ Angry ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက်ကုစား
အကောင်းဆုံးဂျာမန် Grammar စာအုပ်
Hattie စမုန်နက်: အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှအရွေးခံရပထမဆုံးအမျိုးသမီး